Booliiska Maraykanka oo heegan la galiyay kadib markii la dhigay masjid muuqaalka Masiix - Horn Future
Booliiska Maraykanka oo heegan la galiyay kadib markii la dhigay masjid muuqaalka Masiix
New York(Horn Future)-Booliiska Maraykanka ayaa ku dhawaaqay xaalad heegan ah in la galiyay ciidamadiisa Axaddii kadib markii muuqaalka ay ku tilmaamaan inuu yahay nabi Ciise la dhigay xayn-daabka masjid kuyaala degaanka Long Island ee gobolka New York ee waqooyi-bari ee dalkaasi.
War qoraal ah oo uu soo saaray booliiska Mareykanka ayaa lagu sheegay in xubno katirsan ay raacdo ugu jiraan qofkii ama dadkii dhigay muuqaalkan masjidka,iyada oo dhacdadan laga yaabo inay tahay “dambiyada nacaybka” ah ee ka dhanka ah Muslimiinta sida ay qortay warbaahinta caalamku.
Dhiniciisa,xafiiska Golaha Xidhiidhka Islaamka Maraykanka ee (CAIR) ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in “nacayb indho la’aan ah laga yaabo inuu ka dambeeyo dhacdadan”.
Ciidamada booliiska ayaa waxay heleen wax la rumeeysan yahay inay tahay qaybo ka mid ah jidhka maydka gabadh Muslimad ah oo da’deedu ahayd 17 jir bishii lasoo dhaafay taas oo la afduubtay kadib markii ay ka baxaday masjid kuyaala magaalada Stirling ee gobolka Virginia maalin Axad ah.
Muslimiinta ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa ay ka cabanayaan nacaybka ka dhanka ah ee sii kordhaya taas oo qayb ka ah dambiyada iyo colnimada loo qaaday Islaamka ee ka dhacaya dalal badan oo katirsan reer Yurub,taas oo sababtay soo bixitaanka xisbiyada garabka midig ee nacaybka Islaamku ku fogaaday.
Warbixin uu soo saaray Golaha Xidhiidhka Islaamka Maraykanka ee (CAIR) bishii May ayaa waxa lagu muujiyay inay kordheen 57% dambiyada nacayb ka ah ee dhanka ah Muslimiinta dalka Mareykanka sanadkii 2016 marka la barbar dhigo 2015.
Waxaa xusid mudan in hadaladii uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii lagu guda jiray ololahii doorashada sanadkii la soo dhaafay,iyo go’aamada lagu mamnuucayo Muslimiinta ka yimaada dalalka Islaamka inay soo galaan Maraykanka,ay qayb ka yihiin kor u kaca tirada nacayb ka dhanka ah Muslimiinta, marka loo eego kuwa dhaleecaya.
Xarunta tirakoobka ee( “Pew” Research Center) ayaa tirada dadka Muslimiinta ee Maraykanka ku qiyaastay 3.3 malyuun, oo ah 1% tirada guud ee dadweynaha dalka,waxana xaruntani ay saadaalisay in tiradani ay laba laabmi doono marka la gaadho sanadka 2050.
« Austria oo sheegtay inay ka hortagtay inuu dalka soo galo wasiirka dhaqaalaha ee dalka Turkey	» Burundi: Huit morts dans une attaque à la grenade dans le Nord